ဓားကိုင်ပြီးသောင်းကျန်းသူကြောင့် ပရိသတ်အထင်မြင်လွဲတာခံလိုက်ရတဲ့ အိမ့်ချစ် - Myanmarload
ဓားကိုင်ပြီးသောင်းကျန်းသူကြောင့် ပရိသတ်အထင်မြင်လွဲတာခံလိုက်ရတဲ့ အိမ့်ချစ်
လွန်ခဲ့သော ၅ လ က 13:38 January 11, 2019
အနုပညာရှင်တိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကို အိမ့်ချစ်တစ်ယောက် ပရိသတ်တွေကိုပြောပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာရှင်တော်တော်များများဟာ " မာနကြီးတယ် " ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ်ခံရတာဖြစ်လို့ ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်ကို သူမကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ " ပွဲတစ်ပွဲမှာ ကို့ဆီလူအုံနေတာဂုဏ်ယူစရာပေါ့လေ ဒါကြောင့်လဲပရိတ်သတ်တွေကို B612နဲ့ သူတို့မလှမချင်းရိုက်ရိုက် 360 နဲ့ရိုက်ရိုက်Beauty Plus နဲ့ မိတ်ကပ် effect တွေထည့်ရိုက်ရိုက် timer 10 sec လောက်ချိန်ပြီးပဲရိုက်ရိုက် အရိုက်ခံပေးကြပါတယ် ဒါဟာပရိတ်သတ်မေတ္တာကိုသိလို့ မေတ္တာတုံ့ပြန်ပြီး ရင်းရင်းနှီးနှီးကိုတွဲအရိုက်ခံပေးတာပါ ဒါဆိုဂုဏ်ယူစရာဆို ဘာလို့ တစ်ခါတစ်လေမှာဓာတ်ပုံအရိုက်မခံတာလဲ.? ဘာလို့မာနကြီးလိုက်တာလို့အသတ်မှတ်ခံအပြောခံပြီး ဓာတ်ပုံအရိုက်မခံရတာလဲ..?? " ဆိုပြီး အစချီကာ သူမကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ကိစ္စလေးကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
" မနေ့ညကပွဲကအကြောင်းလေးပြောပြပါ့မယ် ပွဲမှာကိုကနောက်ဆုံးဆိုရတာမို့ ရာသီဥတုကလဲအေးတာမို့ကို့အလှည့်မရောက်ခင် ကားပေါ်မှာပဲထိုင်ရင်း စောင့်နေတာပေါ့ အဲ့အချိန်မှာကို ကားဘေးမှာ ကောင်လေး ၈ယောက်လောက်ကားဘေးမှာမူးပြီး အော်ဟစ်နေကြတာ ဟေ့ရောင် မင်းတို့ အိမ့်ချစ်ကို ဖမ်းပြီးဆွဲခေါ်သွားရဲလား ဘာညာအော်ဟစ်နေတာ ကျန်တဲ့ကောင်လေးတွေကလဲ ကြာတယ်ကွာဟေ့ရောင်ချချ ဟားဟားဟီးဟီးနဲ့ နောက်နေကြတာဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ့်မှာမဆိုခင်ထဲက စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်နေရပါပြီ ခဏနေတော့ ကားဆရာက ကားပေါ်တက်လာပြောပြန်ရော အမရေ ကားဘေးကဖြတ်သွားတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဆို လက်ထဲမှာဓားကိုင်သွားတာအမတို့အောက်ဆင်းရင် သတိထားဦးတဲ့ဆိုတော့ပိုစိုးရိမ်မိပြန်ရော ကိုနဲ့ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင် စာဖတ်သူတို့လဲဒီလို သတင်းကြားရင်အဲ့လိုပွဲထဲသွားကြည့်ရဲပါတော့မလားနော် အဲ့ဒါနဲ့ ကိုလဲကြောက်ကြောက်နဲ့ဆက်ထိုင်နေတာ ခဏနေကားကို ဒုံးဒုံးဒိုင်းဒိုင်းလာထုပြန်ရော မှန်တွေကိုထုပြီးကားဘေးကဖြတ်ဖြတ်သွားတဲ့မူးနေတဲ့ လူတွေမှအများကြီးပဲ ကိုလဲကြောက်ကြောက်နဲ့ကားထဲ ထိုင်နေမိတာ ကို့ရှေ့ကဆိုတဲ့တစ်ယောက်က ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောမှပဲ ဟာ..ငါ့အလှည့်ဆိုပြီး ကားပေါ်ကပြေးဆင်းရပါတော့တယ် အဲ့ချိန် အမကြီးတစ်ယောက်က အမနဲ့ပုံရိုက်ချင်လို့ဆိုပြီး ဘေးကလိုက်ပြောတော့ ဆိုခါနီးမို့မရတော့လို့ပါအမလို့ ပြောတာကို အမလေးမာနကြီးလိုက်တာ ပုံလေးတစ်ပုံရိုက်တာကိုများဆိုပြီး ဝေဖန်သတ်မှတ်ခံလိုက်ရတော့တာပါပဲ " ဆိုပြီး ပြောပြထားပါတယ်။
ဒီနောက်မှာလည်း " ပထမပိုင်းဆိုပြီးဆင်းလာတော့ထပ်ကြားရတဲ့သတင်းက တစ်ယောက်ဓားနဲ့ထိုးခံရတယ် ဓားထိုးမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ အဲ့တော့ ဒုတိယပိုင်းဆိုပြီးတဲ့အခါ အားလုံးလဲခပ်လန့်လန့်မို့ အပြေးအလွှားကားပေါ်ပြေးတက်ကြဖို့ လုပ်ကြရပါတယ် အဲ့လိုတက်ဖို့ပွဲထဲကအထွက်မှာတစ်ခါ ကောင်မလေးတွေက ပုံရိုက်ချင်လို့ပါဖြစ်ပြန်ရော မိန်းကလေးတွေမို့ အားနာလို့ရပ်ပြိးရိုက်ပေးလိုက်ရင် မူးပြီးထွက်လာတဲ့ သူတွေလဲအနားမှာဝဲနေတာမို့ တစ်ယောက်ကိုရိုက်ပေးလိုက်ရင် နောက်လူတွေပါလာတော့မယ် မိန်းမယောကျာ်းအုံလာတော့မယ် မူးတဲ့သူတွေလာတော့မယ် ဓားပါပါတယ်ဆိုတဲ့သူ တစ်ခုခုလုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်လာသူတွေလဲပါလာတော့မယ် အန္တရာယ်ဆိုတာ လက်တစ်ကမ်းမှာမို့ ကိုယ်လဲအသက်နဲ့ လူသားမို့ကြောက်တတ်လို့ အရိုက်ခံပေးလို့မရတော့လို့ပါညီမလေးတို့ရေလို့ပြောပြီး အရိုက်မခံတော့ပဲ ကားပေါ်ပြေးတက်မိပါတော့တယ် သေချာတယ်ကားကြီးထွက်သွားတော့ပြောပြီးကျန်ခဲ့ကြမှာ အိမ့်ချစ်က မာနကြီးလိုက်တာ...!!! ဘာမှပြန်မဖြေရှင်းတော့ဘူးအဲ့လိုပြောလဲ ပြုံးပြီးပဲနေလိုက်တော့တယ်... " ဆိုပြီး ရှင်းပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းမှာအခက်အခဲကိုယ်စီ အကြောင်းကိုယ်စီနဲ့မို့ ပရိသတ်ကြီးကပဲ နားလည်ပေးလိုက်ပါနော်။